Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sarre Dowlada Puntland ayaa abaalmarino gudoonsiisay 10-ka arday ee ugu sareeyey imtixaankii fasalka afraad ee dugsiyada sarre Puntland – Ministry of Education in Puntland
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sare ee Dowlda Puntland oo Daah furtay Maanta Masharuuca Waxbar Caruurteena Soomaaliyeed.
Wargalin: Furitaanka dugsiyada ku yaalla Badda cas ee Puntland
Wasiir Ku xigeenka Wasaaradda Waxbarshada iyo Tacliinta sare oo Tababar u soo xiray 325 Macalin oo barayaal ka ah dugsiyada hoose/dhaxe ee Puntland
Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sarre Dowlada Puntland ayaa abaalmarino gudoonsiisay 10-ka arday ee ugu sareeyey imtixaankii fasalka afraad ee dugsiyada sarre Puntland
By editor	/ July 30, 2017
26/julay/2017- Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sarre Dowlada Puntland ayaa maanta waxay abaalmarino gudoonsiisay 10-ka arday ee ugu sareeyey imtixaankii fasalka afraad ee dugsiyada sarre, waxaana kazoo qeyb galay munaasabad balaaran oo lagu qabtay xarunta hay,adda cilmi barista PDRC Madaxweyne kuxigeenka Puntland, Masuuliyiinta Wasaaradda, Waalidiinta Ardeyda,Qaar ka mid ah Maamulayaasha Iskuuladda sarre ee Puntland iyo Ardeyda la gudoonsiiyay abaalmarinta.
Wasiirka Waxbarashada Puntland Abshir Aw-Yusuuf Ciise oo ka warbixiyay dadaalka ay sameeyeen ardeyda la abaalmariyay ayaa xusay inay wasaaradiisu mar kasta ku dhiiri galinayso firfircoonidooda, wuxuuna ku amaanay waalidiinta iyo macalimiinta ardeydaan sidey usoo barbaariyeen.
Madaxweyne kuxigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar (Camay) oo dhankiisa ka hadlay munaasabada ayaa sheegay inay tahay maanta oo kale wax lagu faano, isagoona ardeyda uga mahadceliyay dadaalkooda iyo kaalmaha ay soo kala istaageen.
Wuxuu intaas ku darey Eng Camay inay ka go’antahay dhiiri galinta waxbarashada, isagoo mahadu celiyey iskuulada 10 arday ka baxeen,Iyadoona ka dib abaal marinta si wada jir ah ay u gudoonsiiyeen 10-kii Ardey Madaxweyne kuxigeenka iyo Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sarre ee Puntland.
Ardeyga kaalinta 1aad ka galay Imtixaamka shahaadiga ee sanad dugsiyeedka dugsiga sarre waxaa lagu magacaabaa Cabdulaahi Shiikh Maxamuud Xaaji Yuusuf waxaa la gudoonsiiyay gaari nooca raaxadda ah , Sidoo kale labada ardey ee ku xigta kaalmaha labaad iyo saddexaad waxaa la gudoonsiiyay lacag dhan $ 1,000 (Midkiiba Kun Dollar).
Sidoo kale Wasaaradda Waxbarashada iyo Tacliinta sarre ee Puntland ayaa abaal marin lagu dhiirigalinayo siisay maamulayaasha 10-ka iskuul ee ay wax ka baranayeen ardeyda ugu sareysay Imtixaamka shahaadiga ee sanad dugsiyeedka Puntland.